E zigara mmadụ iri na abụọ ka ha nyopụta otú Kenan dị (1-24)
Akụkọ ọjọọ mmadụ iri kọrọ (25-33)
13 Jehova gwara Mosis, sị: 2 “Zie ụmụ nwoke ka ha gaa nyopụta otú ala Kenan dị, bụ́ ala m ga-enye ndị Izrel. Ị ga-esi n’ebo nke ọ bụla kpọta otu onye ka o soro ná ndị ị ga-eziga. Onye ọ bụla n’ime ha+ ga-abụ onyeisi.”+ 3 N’ihi ya, Mosis si n’ala ịkpa Peran+ ziga ha otú Jehova nyere n’iwu. Ụmụ nwoke niile ahụ bụcha ndị isi ndị Izrel. 4 Ihe a bụ aha ha: n’ebo Ruben, Shamua nwa Zakọ; 5 n’ebo Simiọn, Shefat nwa Horaị; 6 n’ebo Juda, Keleb+ nwa Jefune; 7 n’ebo Ịsaka, Aịgal nwa Josef; 8 n’ebo Ifrem, Hoshia+ nwa Nọn; 9 n’ebo Benjamin, Paltaị nwa Refọ; 10 n’ebo Zebulọn, Gadiel nwa Sodaị; 11 n’ebo Josef,+ ya bụ, ebo Manase,+ Gadaị nwa Susaị; 12 n’ebo Dan, Amiel nwa Gemalaị; 13 n’ebo Asha, Sitọ nwa Maịkel; 14 n’ebo Naftalaị, Nabaị nwa Vọfsaị; 15 n’ebo Gad, Guel nwa Mekaị. 16 Ihe a bụ aha ụmụ nwoke Mosis ziri ka ha gaa nyopụta otú ala ahụ dị. Mosis gụrụ Hoshia nwa Nọn Joshụa.*+ 17 Mgbe Mosis na-edunye ha ka ha gaa nyopụta otú ala Kenan dị, ọ sịrị ha: “Gaanụ Negeb,* gbagookwanụ n’ebe bụ́ ugwu ugwu.+ 18 Chọpụtanụ otú ala ahụ dị,+ chọpụtakwanụ ma ndị bi na ya hà siri ike ka ọ̀ bụ na ha esighị ike, ma hà dị ọtụtụ ka hà dị ole na ole, 19 ma ala ha ọ̀ dị mma ka ọ̀ bụ na ọ dịghị mma, ma ọ̀ bụ ụlọikwuu ka ha mara n’obodo ndị ha bi ka à rụsiri obodo ha ike. 20 Chọpụtakwanụ ma ala ha ọ̀ na-eme nri ka ọ̀ bụ na ọ naghị eme nri,+ ma osisi ọ̀ dị na ya ka ọ̀ bụ na ọ dịghị. Nweenụ obi ike,+ wetakwanụ ụfọdụ n’ime mkpụrụ ala ahụ.” Oge ahụ bụ oge mkpụrụ vaịn mbụ na-acha.+ 21 Ha wee gaa nyopụta otú ala ahụ dị malite n’ala ịkpa Zin+ ruo Rihọb,+ nke dị nso na Libo-hemat.*+ 22 Mgbe ha garuru Negeb, ha bịarutere Hebrọn,+ bụ́ ebe Ahaịman, Shishaị, na Talmaị,+ bụ́ ndị Anakim,+ bi. Afọ asaa agaala a rụrụ Hebrọn tupu a rụọ Zoan n’Ijipt. 23 Mgbe ha bịarutere na Ndagwurugwu Eshkọl,+ ha gbuturu otu alaka osisi vaịn nke mịrị nnukwu ụyọkọ mkpụrụ vaịn. Mmadụ abụọ n’ime ụmụ nwoke ahụ ji okporo osisi buru ya. Ha butekwara ụfọdụ mkpụrụ pomigranet na ụfọdụ mkpụrụ fig.+ 24 Ha kpọrọ ebe ahụ Ndagwurugwu Eshkọl*+ n’ihi ụyọkọ mkpụrụ osisi ahụ ndị Izrel gbutere n’ebe ahụ. 25 Mgbe ụbọchị iri anọ gachara,+ ha si n’ala ahụ ha gara inyopụta otú ọ dị lọta. 26 Ha wee gakwuru Mosis na Erọn na nzukọ Izrel niile n’ala ịkpa Peran, nke dị na Kedesh.+ Ha wee kọọrọ nzukọ ahụ niile otú ha si jee, gosikwa ha mkpụrụ ndị si n’ala ahụ. 27 Ha kọọrọ Mosis, sị: “Anyị banyere n’ala ahụ i dunyere anyị ka anyị gaa. N’eziokwu, mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya.*+ Mkpụrụ ndị a sikwa na ya.+ 28 Ma, ndị bi n’ala ahụ siri ike. A rụsiri obodo ndị dị na ya ezigbo ike. Anyị hụkwara ndị Anakim n’ebe ahụ.+ 29 Ndị Amalek+ bi n’ala Negeb.+ Ndị Het, ndị Jebus,+ na ndị Amọraịt+ bikwa n’ebe bụ́ ugwu ugwu, ndị Kenan+ ebiri n’akụkụ oké osimiri+ nakwa n’akụkụ Osimiri Jọdan.” 30 Ka ndị Izrel kwụ n’ihu Mosis, Keleb gbalịrị ime ka ha kwụsị ịtụ ụjọ. Ọ sịrị: “Ka anyị gawa ozugbo. Anyị ga-eweghara obodo ahụ n’ihi na anyị ga-emerili ya.”+ 31 Ma ụmụ nwoke ahụ ha na ya so gaa sịrị: “Anyị agaghị alụsoli ndị obodo ahụ agha n’ihi na ha ka anyị ike.”+ 32 Ha wee na-akọrọ ndị Izrel akụkọ ọjọọ+ banyere ala ahụ ha gara nyopụta otú ọ dị, na-asị: “Ala ahụ anyị gara inyopụta otú ọ dị bụ ala na-ata isi ndị bi na ya. Ndị niile anyị hụrụ na ya gbara ajọ dimkpa.+ 33 Anyị hụkwara ndị Nefilim n’ebe ahụ, bụ́ ụmụ Anak,+ ndị si n’agbụrụ* ndị Nefilim. Anyị dịkwa ka ụkpara, ma n’anya anyị ma n’anya ha.”
^ Eshkọl pụtara “Ụyọkọ Mkpụrụ Osisi Vain.”
^ Ma ọ bụ “ndị bụ́ ụmụ.”